Mitambo, 04 Chivabvu 2019
Mugovera 4 Chivabvu 2019
Chivabvu 03, 2019
ZPC Kariba Yoronga "Kugwinha" Dembare
Chikwata cheFC Platinum chatarisana nekuwedzera hutungamiri hwacho chiri pamusoro pegungano reCastle Lager Premier Soccer League panguva iyo murairidzi mutsva weDynamos Tonderai Ndiraya ari kuyedza kubvisa chikwata chake mumadhaka machiri.
Kubvumbi 23, 2019
Dynamos Inodzinga Lloyd Chigove
Musangano wevatungamiri veDynamos wakaitwa neChipiri mangwanani wakabvumirana kudzinga Chigove zvichitevera kurohwa kwakaitwa chikwata ichi 1-0 neHerentals neSvondo.
Kubvumbi 22, 2019
Vatsigiri veDynamos vanetsana nemapurisa nhasi mushure mekunge chikwata chavo chakundwa 1-0 neHerentals kuRufaro Stadium mumutambo weCastle Premier Soccer League.
Kubvumbi 14, 2019
Vatsigiri veNhabvu Votarisira Kubudirira kweZimbabwe muGroupA
Vatsigiri venhabvu vari kufara nemakwikwi e2019 Africa Cup of Nations zvichitevera kuiswa kwechikwata che Zimbabwe Warriors mugungano rine nyika ina dzinoti Egypt, Democratic Republic of Congo, neUganda, vachiti gungano iri rakapfava pane remakore apfuura.
Kubvumbi 10, 2019
CAF Inoti Bamala Akagona Kuramba Chibodzwa chaChungwa weCaps United
Sangano reConfederation of African Football rinoti vapindira mubati wepembe, VaThabani Bamala, vakaita basa ravo nemazvo apo vakaramba kutambira chibodzwa chakanwiswa naDominic Chungwa pamutambo weCaps United ne Highlanders.
Chikwata chemaWarrior Choshaya Nyika dzeKuedzana Nadzo Masimba
Mutungamiri weZimbabwe Football Association, VaFelton Kamambo, vanoti havasati vawana zvikwata zvekuedzana masimba nemaWarriors segadziriro ye2019 Africa Cup of Nations kusvikira musi wa 12 Kubvumbi apo pachaitwa mubatanidzwa kana kuti draw yezvikwata zvichanokwikwidza kumafainari eAfcon.
Kubvumbi 01, 2019
Kukunda kweChikwata Dynamos Kwounza Mufaro kuVatsigiri Vacho
Chikwata chine mukurumbira cheDynamos chasimudza makwikwi acho e 2019 Castle Lager Premier Soccer League zvine mutsindo. Michael Kariati anotitaurira kuti Dembare yakaitei mukupera kwesvondo.
Mudzimai Akafa kuNational Sports Stadium Ovigwa neChipiri
Mutungamiri weZIFA VaFelton Kamambo vanoti vari kushushikana zvikuru nekushaya kwemumwe mudzimai aive mutsigiri mukuru wemaWarriors, aizivikanwa nekuti Amai Tadiwa.
Kurume 24, 2019
Chikwata chenhabvu chemaWarriors chakwanisa kupa vana veZimbabwe mufaro munguva iyo nyika iri kuchema tsaona yakakonzerwa nedutumupengo Cyclone Idai, zvichitevera kubudirira kwachaita kuenda kumafainari emakwikwi e2019 Africa Cup of Nations achaitirwa kuEgypt gore rino.
Kurume 22, 2019
Zimbabwe Yotamba neCongo Brazzaville Mumutambo weAFCON
Chikwata cheZimbabwe chemaWarriors chirikutarisira kukunda kunyange hazvo chasangana nematambudziko akawandisa munzira yemutambo wavo we 2019 Africa Cup of Nations neCongo Brazzaville nesvondo.
Kurume 11, 2019
Murairidzi weDynamos, Chigove, Anoti Haasati Agutsikana neChikwata Chake
Murairidzi wechikwata chenhabvu cheDynamos, Lloyd Chigove, anoti haasati apedza kuvaka chikwata chake chemwaka uno kunyange hazvo Dembare yakarova maGreen Machine eCaps United 2-0 mumutambo weCharity Challenge Cup wakatambwa muHarare neSvondo.